About Us - Xinglu Chemical Teknolojia Co., Ltd.
Shanghai Xinglu Simika Teknolojia Co., Ltd.
Shanghai Xinglu Simika Teknolojia Co., Ltd (Zhuoer Chemical Co., Ltd) no misy ao amin'ny ara-toekarena --- afovoany Shanghai. Tsy manaraka foana "Advanced fitaovana, fiainana tsaratsara kokoa", ary ny komity ho an'ny Research sy ny fampandrosoana ny teknolojia, mba ataovy ampiasaina amin'ny olombelona 'ny fiainana isan'andro mba hahatonga ny fiainana tsara kokoa.
Ankehitriny, indrindra indrindra isika eto an-tany tsy fahita firy rehefa mifandray amin'ny fitaovana, Nano fitaovana, OLED fitaovana, ary ny fitaovana hafa mandroso. Ireo fitaovana ireo mandroso be ampiasaina amin'ny simia, fitsaboana, biolojia, OLED fampisehoana, OLED mazava, fiarovana ny tontolo iainana, angovo vaovao, sns
Fa amin'izao fotoana izao ny fotoana, dia manana orinasa famokarana roa ao amin'ny faritanin'i Shandong. Mandrakotra ny faritra 30.000 metatra toradroa, ary manana mpiasa maherin'ny 100 olona, ​​izay 10 olona ireo zokiolona ny injeniera. Efa nanorina pamokarana sahaza ho an'ny fikarohana, mpanamory fitsapana, sy famokarana bahoaka, ary koa nanorina Labs roa, ary ny anankiray fitsapana foibe. Tsy maka fanahy be dia be ny vokatra tsirairay alohan'ny fanaterana mba hahazoana antoka isika manome vokatra tsara kalitao ho an'ny mpanjifa.
Izahay mpanjifa handray avy maneran-tany mba hamangy ny orinasa ary hanorina tsara ny fiaraha-miasa miaraka!